US / 48A (11.5KW) Mpanamboatra sy mpamatsy | China US / 48A (11.5KW) Factory
Factory mivantana 50A 250V AC Type1 Herinaratra mitondra herinaratra fiara amerikana standard cable Evse Type 1
Factory mivantana China EV Quick Charger, EV Charger, efa niasa tsy tapaka izahay ho an'ireo mpanjifa eo an-toerana sy iraisam-pirenena mihombo. Izahay dia mikendry ny ho mpitarika manerantany amin'ity indostria ity ary miaraka amin'ity saina ity, dia mahafaly anay tokoa ny manompo sy mitondra ny tahan'ny fahafaham-po avo indrindra eo amin'ny tsena mitombo.
Fiampangana fiambenana 2, haavo 240 volt (EV)
Haavo 2, 240 volt electronics station (EV) dia miantoka ny EV rehetra hatramin'ny 9X haingana kokoa noho ny rindrin'ny rindrina mahazatra, miaraka amina toerana amperage miovaova hatramin'ny 50 amp (14A-50A) sy plug-in na fametrahana mafy. Miaraka amin'ny fiantohana 3 taona voafetra sy ETL voatanisa ho fiarovana ara-herinaratra, mora ny manome fitaovana EV ho an'ny elektrisianina hametraka ao anaty trano na hivoaka. Ny lozisialy elektrika EVC10 dia tobin-kazo mandeha amin'ny alàlan'ny Wi-Fi ary manolotra fampiasa mandoa hetra amin'ny alàlan'ny fampiharana, ao anatin'izany ny fahaizana mametraka fandaharam-potoana famandrihana, mahazo fampahatsiahivana hampidirina, jereo ny tantaram-piainanao rehetra amin'ny toerana iray, mifandray amin'i Alexa , ary maro hafa.
11.5kw AC EV Charger Dikan-teny kininina elektrika miandraikitra ny fiantsonana Solar EV
Hot sale China New Energy Automobile Charger, Charger, Amin'izao fotoana izao, manana mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao isika, anisan'izany i Etazonia, Russia, Spain, Italy, Singapore, Malaysia, Thailand, and Poland. Ny iraka ataon'ny orinasanay dia ny manome ireo entana avo lenta avo indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra. Efa nanantena ny hanao orinasa miaraka aminao izahay!